के हाे स्मार्ट कन्डम ? प्रयोगअघि चार्ज गर्नुपर्ने - Purbeli News
के हाे स्मार्ट कन्डम ? प्रयोगअघि चार्ज गर्नुपर्ने
प्रकाशित मिति: बुधबार, भाद्र २८, २०७४ समय: २२:०२:१५
स्मार्ट वाच र गुगल ग्लासपछि शरीरमा लगाउन मिल्ने प्रविधिको रुझान बढिरहेको छ । यसको नयाँ कडीको रुपमा आएको छ, स्मार्ट कन्डोम । यसको बिक्रीका लागि दर्ता प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । यो स्मार्ट कन्डोम बनाउने कम्पनीको दाबीअनुसार यसले त्यस्ता कठिन सवालको जवाफ पनि दिने छ, जसका बारेमा मानिसहरुले सोचेकासम्म हुँदैनन् ।
बेलायतको एउटा अनलाइन स्टोरमा यसको बिक्रीको प्रक्रिया दर्तामार्फत सुरु गरिएको हो । कम्पनीले यसलाई बजारमा ल्याउने दाबी २०१६ मा नै गरेको थियो । कम्पनीका अनुसार स्मार्ट कन्डोमको प्रयोगबाट प्रयोगकर्ताले सेक्स कतिपटक, कति लामो, यहाँसम्म कि कति समयपछि गरिएको हो भनेर पनि जानकारी पाउँछन् ।
त्यसो त यसको नाम स्मार्ट कन्डोम भए तापनि यो सुरक्षित सेक्सका लागि भने होइन । यो एउटा रिङ हो जुन कन्डोमको सतहको भागमा फिट भएको हुन्छ । याने कि तपाईंले यसको साथमा सामान्य कन्डोम प्रयोग गर्नु भएन भने गर्भधारण र यौनरोगलाई रोक्न सक्नुहुन्न । कम्पनीले यो कन्डोमलाई पटक-पटक प्रयोग गर्न सकिने दाबी पनि गरेको छ । यसले नानो चिप र सेन्सरको प्रयोगबाट आँकडाहरु संकलन गर्छ । एकपटक सेक्स भएपछि यसलाई ब्लुटुथमा जोडेर मोबाइल ऐपमार्फत यसको तथ्यांक डाउनलोड गर्न सकिन्छ । आंकडा डाउनलोड गरिसकेपछि आफैं यसबाट डिलिट हुन्छ र यो फेरि प्रयोगका लागि योग्य हुन्छ ।
कम्पनीले दिएको विवरणअनुसार स्मार्ट कन्डोम प्रयोग गर्नुभन्दा पहिले चार्ज गर्नुपर्छ र यो काम यूएसबी पोर्टमार्फत सजिलैसित हुन्छ । यद्यपि कम्पनीका दाबीमाथि विभिन्न सवालहरु उठेका छन् । आलोचकहरुको भनाइमा यो कुनै उपयोगी बस्तु नभएर प्रोपोगाण्डाबाट व्यापार गर्ने प्रयास मात्र हो । उत्पादनको तस्वीर नआउँदासम्म यो भन्न मुस्किल हुन्छ कि यसको प्रयोग कति सहज छ ।
यो कन्डोम यौन आनन्द बढाउनका लागि होइन । न त यो फुट्ने वा लिक हुने सम्भावनाबाट टाढा छ । आलोचकहरुले स्मार्ट कन्डोमबाट कुनै पनि उपयोगी कुरा हासिल नहुने दाबी गरेका छन् । एक घन्टा चार्ज गर्दा यसलाई ७-८ घन्टासम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसको तथ्यांक केवल प्रयोगकर्ताले मात्रै हेर्न सक्छ, यद्यपि यसलाई सेयर गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ । एक वर्षको वारेन्टीसहित यसको मूल्य राखिएको छ, करिब साढे सात सय डलर । साभार श्राेतः अनलाईन खबर
राशिफल / आश्विन ०४ गते बुधबार २०७४
हनीप्रीत धरानमा पक्राउ परेकाे आशंका
प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी गच्छादारलाई
प्रा डा गोविन्द केसीले चार सूत्रीय माग राखी पुनः सत्याग्रह आन्दोलन गर्ने
महोत्तरीका दुई वडामा काँग्रेस विजयी
पुरुष या महिला काे मा यौन चाहना बढी